Ukuze ukukhula efanele kanye nokuthuthukiswa izitshalo kuyadingeka ukuqinisekisa kokuphuza esifike ngesikhathi. Of Ikakhulukazi ukubaluleka ukunisela izitshalo horticultural ukuthola phakathi nonyaka uma isimo sezulu esishisayo. izitshalo Ukunisela abanakwethenjwa ngaso sonke isikhathi uqinisekise ukuthi uma kukhona kokufika kude kude izindawo eziyinhloko lokuhlala noma wensimu ngezinye izikhathi umuntu akanakho isikhathi esanele nomzamo. Okwamanje, le nkinga ukunikezela ngesikhathi esifanele amanzi imanuwali oyifunayo noma ngenkasa ngokuzenzekelayo izitshalo engadini, imifino, izimbali, izithelo, kusiza ukuxazulula isethi ukuchelela timer.
Okwamanje isitshalo ngenkasa abalawuli for zokugcina, izingadi ayatholakala izinguqulo ezimbili control: manual kanye othomathikhi. Ukunisela divayisi design izinhlobo ihlukaniswa ngokweminyaka lezi zinhlobo ezilandelayo: okuzenzakalelayo, mechanical, electronic futhi digital. ngenkasa timer kungenziwa ezakhelwe yiluphi uhlelo ezindaweni ngenkasa etshalwe izitshalo. Kukhona amamodeli efakwe kumpompi wamanzi. Futhi, uhlobo oluthile abalawuli amelana kwezimo zendawo ezimbi futhi kungaba ngaphandle.
Izinzuzo e ukusetshenziswa abalawuli
ukuchelela timer, obizwa a isilawuli, uyakwazi lokuveza amanzi, hhayi kuphela ekhaya, amasimu ezithelo kodwa futhi ezinkulu-ndawo, kungakhathalekile okuyinto izitshalo ezikhulayo khona. Ngenxa yokuthi zemifino nezithelo izitshalo ngezindlela ezahlukene ukudla namanzi, idivayisi ngosizo uhlelo ikuvumela ukuba ukhethe bese ufake edingekayo wokunisela uhlelo, ikhumbula izici of izitshalo. Ngaphezu kwalokho, ngenkasa timer has a inzwa ukuthi usabela imvula nomswakama eliphezulu. Kuye nesenzakalo imvula, amanzi kungase kumiswe ngokuzenzakalela, futhi ngcono izimo zezulu waphinda uqhubeke. Lesi sici aqede ugcwalise inhlabathi bese ugcine amanzi ukusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, kukhona amamodeli zingalawulwa ukude. Esimweni lapho endaweni ehlukile siniselwe zokwenezela, kungenzeka ukushintsha uhlelo olufakwe ne akude. Umnikazi asikho isidingo ukuba ngokuqondile utshani.
othomathikhi ukuthambisa timer kusiza nenselele ukunikezela lohleliwe futhi alinganisiwe yamanzi ukunisela izitshalo. Kubuye ngokulawulwa ngokuzenzekelayo ngenkasa ukuvuza izitshalo, engomunye wabayishumi amadivayisi eliphumelela kakhulu yokutshala izimila in zokugcina. ngenkasa isilawuli lingacushwa ukwenza elikhulu alondoloze nemithombo yamanzi mode, ngesisekelo izimo ezidingekile zezimila ngamunye. Ngo zokugcina ifakwe izikhathi ngoba othomathikhi kusetshenziswa isimiso sokunisela ngenkasa kufanele ihlinzekwe ukupholisa ngempumelelo, okuyinto ebalulekile ukukhula ngempumelelo izitshalo. Uma kudingekile ukuze nginisele ezindaweni ezinkulu, umkhawulo kudonsa ophezulu imishini ngenkasa, okuyinto okunzima kakhulu ukuwenza asebenze. Le divayisi kunciphisa umthwalo uhlelo ukudonsa nge yanjalo ngokwengxenye ingxenye amanzi ukugcwaliswa.
Isilawuli I-drip irrigation eyenzeka
muva Abalimi abatshali, abanikazi ezindaweni suburban babé abalawuli esetshenziswa kabanzi e le drip irrigation eyenzeka ohlelweni izitshalo emibhedeni, emasimini encane, nokunye. D. ukusetshenziswa zobuchwepheshe ukuthambisa inikeza ehleliwe othomathikhi alondoloze nemithombo yamanzi ngokuhambisana uhlelo kuyakhethwa noma nezinye zezimila. I abalawuli ukunikeza supply kahle futhi efanele amanzi ezindaweni eziluhlaza ngokuqondile designated amahora. Isikhathi I-drip irrigation eyenzeka ngakususi waterlogging zenhlabathi, okuyinto kunomphumela ezuzisayo phezu impilo izitshalo horticultural.
Izinzuzo abalawuli ukunisela ukuvuza
Ikhono lokufeza ukuchelela amahora angu-24 ngosuku, kungakhathaliseki izimo zezulu.
Ukunikeza supply kancane amanzi lapho izitshalo ziyimpumelelo kakhulu eza bazogcwalisa nabo umswakama.
Okungenzeka ngomnqopho wokunikela ngamanzi nje kuphela, kodwa futhi kuyadingeka nentuthuko yabo kwezithako njengoba amaminerali, nosawoti kanye nomanyolo.
Ukusebenzisa lesi simiso ngenkasa siyasebenza ngoba ngesikhathi ageje enjalo samanzi okunisela amahlamvu, kunciphisa ingozi ebangela izifo isitshalo.
Ngenxa ukumuncwa okusheshayo amanzi nezakhi ngqo ohlelweni isitshalo impande yanda kakhulu, isikhathi sabo ukuthuthukiswa.
Ukusebenzisa iwashi ukuba likhale ngemva drip irrigation eyenzeka, ngenkasa kungenzeka ukulungisa inqubo kwimodi okuzenzakalelayo.
ngenkasa isilawuli IBHOLA
Kukhona amamodeli we izikhathi ukuthi ube ibhola valve. Idivayisi amanzi supply ku iwaphe- ibhola futhi sihamba lemali oyifunayo okusamanzi. Ingcindezi jet amanzi ayidingekile. Valve ijikeleziswa ngokuzenzakalela kulandela uhlelo isethi ku isilawuli. Sam Ball ukuthambisa electronic timer ine isibonisi electronic ukuthi kusiza izinhlelo idatha oyifunayo: isikhathi, imvamisa, PERIODICITY, ubude kanye nezinye ukuthambisa. Iphinde ubika isimo ophethe kanye eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa imishini. Imisebenzi uchelela timer ibhola kusuka ibhethri, ozobakhona lonke ngenkasa isizini, kuze kube sikhatsi sekuvuna.
Isilinganiso ukunisela etholakala lezi zinhlobo ezilandelayo:
Futhi, izikhathi eziningi isiteshi ayatholakala ezinguqulweni ezimbili: mechanical, electronic. ukuchelela timer ekwenzeni mechanical izinhlobo ezahlukene timer electronic lula ukusetshenziswa. Ngakho, ngaphambi kokuqala umsebenzi odingekayo ukusungula ezithiwa phakathi amanzi kanye nesikhathi ukuthambisa.
Ngaphambi kokuqala timer ukusebenza ngogesi kubalulekile ukufaka: usuku, isikhathi sokuqala, khetha uhlelo oyifunayo, okuyinto ofanele kakhulu yokutshala izimila. Okuphakelayo lemali edingekayo amanzi futha ngenkasa senziwa, lapho timer liyala amanzi, bese ukuyeka yokudla, ngemva kwalokho lo umjikelezo iyaphindwa.
ukulethwa cyclical umswakama isethiwe, kuncike zezimila okuyiwona inani lamanzi adingekayo ngenkasa ayilungiselele kusengaphambili, esekelwe izincomo unikezwa by ongoti. Ukusebenza timer ngamunye kuhlinzekelwe, kuye ngohlobo idivayisi, elilodwa noma amabili namabhuzu amabhethri.
Ngaphambi kokusebenzisa i-timer, kumelwe ufunde imiyalelo eze nedivayisi ngamunye ngokucophelela. Izinzuzo multi-umzila izikhathi digital embodiments ayakwazi ukumisa ukuvama ukuvula kanye nokuvala amanzi supply ukunisela, kanye nokunikeza ukuchelela amasiko likhula ezindaweni ezahlukene ngamandla ezahlukene, esekelwe zezimila ngamunye.
Ngokusekelwe Izibuyekezo abalimi abaningi usebenzisa ngenkasa timer ukunisela ngekhompuyutha endaweni, kumele kuphetfwe wokuthi leli thuluzi kusiza kakhulu ukunakekelwa Imithi etshalwe. It ekhulula umhlali ehlobo kusuka ekubeni khona njalo ensimini ukuqinisekisa amanzi zemifino nezithelo izitshalo. Lezi Amadivayisi smart zithatha engxenyeni enkulu ukukhathazeka nsuku komkhakha.